Mma agha nke Damocles: Akụkọ mgbe ochie na ihe ọ pụtara - UniProyecta
Ọ bụ Cicero, onye ọkaibe na -ede akwụkwọ n'oge Rome kere akụkọ akụkọ a.
Akụkọ a kagburu na alaeze Syracuse, narị afọ nke anọ BC.
Damocles bụ onye ikpe a na -akwanyere ùgwù n'oge ọchịchị Dionysus nke Mbụ onye ọchịchị aka ike.
Akụkọ mgbe ochie nwere na Damocles nwara inweta ihu ọma n'aka eze site n'ịkatọ ya ugboro ugboro, n'agbanyeghị na n'ime ala ọ na -enwere ya anyaụfụ maka ike na akụ na ụba ya.
E nwere ọtụtụ ndị kpọrọ Eze Dionysus na nzuzo asị maka aha ọma ya dị ka onye ọchịchị aka ike na onye obi ọjọọ. Mana Damocles ahụghị ka ọ ga -esi sie ike ịnọ n'ọnọdụ eze, naanị ọ hụrụ ego ya.
Ya mere, otu ụbọchị ọ gwara ya.
Eze m, lee ka ị ga -esi nwee ańụrị! O nwere ihe niile nwoke na -achọ… ike, ego, ụmụ nwanyị.
Nke eze ike gwụrụ nke ukwuu maka nkwanye ugwu, zara na otu ụbọchị, ha nwere ike ịgbanwe ọkwa ha. Damocles nwere ike kporie ndụ okomoko eze niile, ma ọ bụrụ naanị awa ole na ole. Damocles jiri ọ joyụ wee nwee ọ andụ nke ukwuu.
N'ụtụtụ echi ya, ọ bịarutere na -enwe obi ụtọ n'obí, onye ọ bụla n'ime ndị na -ejere ya ozi kpọrọ isiala nye ya, o nwere ike rie nri kacha mma na alaeze ahụ wee nwee ọ enjoyụ ụmụ nwanyị mara mma na -agba ya egwu. Ọ bụ otu n'ime ụbọchị kacha mma na ndụ ya, mana ihe gbanwere na mberede mgbe ọ lere anya n'uko ụlọ. N'elu isi nke ya ka e kokwasịrị nnukwu mma agha dị nkọ, kwụpụrụ n'agbụ ịnyịnya nke nwere ike ịda n'oge ọ bụla wee kpatara ọdachi.
Ọ bụ n'oge ahụ kpọmkwem mgbe Damocles nwere ike ịga n'ihu na -anụ ụtọ ọ joyụ niile nke ịbụ eze, opekata mpe otu ụbọchị n'otu ụzọ ahụ. Dionysus ghọtara na ọ hụla mma agha ka ọ kwụrụ wee sị: Damocles, gịnị kpatara na -echegbu gị maka mma agha? A na -ekpughekwa m ọtụtụ ihe egwu kwa ụbọchị nke nwere ike ime ka m pụọ.
Damocles achọghị ịga n'ihu na mgbanwe ọnọdụ wee gwa Diniosio na ọ ga -aga.
N'oge a kpọmkwem Damocles nwere ike ịhụ na ike na akụ na ụba nwere nnukwu akụkụ adịghị mma, na mma agha nwere ike gbupụ isi ya n'oge ọ bụla. N'ihi ya, ọ chọghị ịnọkwa n'ọnọdụ eze ọzọ.
Ka anyị ghara ikpe ndị ọzọ ikpe, anyị amaghị ebe ha nọ. Ikekwe site na mpụga ọ dị ka ha ka anyị mma mana anyị amaghị ibu ha nwere ike ibu.
Ike ma ọ bụ akụnụba agaghị eme gị obi ụtọ ma ọ bụrụ na ha emee ọ ga -abụ nwa oge. Ihe niile bụ nwa oge, ọbụnadị ndụ.
Inicio » omenala » Akụkọ ifo ndị Gris » Mma agha nke Damocles